छोरासँग प्रेम, आमासँग हट सुट « Kamana
छोरासँग प्रेम, आमासँग हट सुट
नायिका प्रियंका कार्कीको सबैभन्दा ठूलो फ्यान यदि कोही छ भने त्यो केवल यही हुइयाँ नै हो । यो हुइयाँ आफूलाई प्रियंकाकाको सबैभन्दा ठूलो फ्यान भएकोमा गर्व महसुस गर्दछ । उनको ठूलो फ्यान भएकै कारण प्रियंकाको हर गतिविधि यसलाई साह्रै राम्रो लाग्छ ।
जस्तो हेर्नोस् न उनले आफ्नो प्रेमी नायक आयुष्मान देशराज जोशीसँग एउटा अवार्ड समारोहमा खुलमखुला चुम्बन गरिन् । त्यसलाई लिएर दुनियाँले अनेकन कुरा गरे । तर, यो हुइयाँलाई भने उनको यो व्यवहार राम्रो लाग्यो । प्यार करना तो डरना क्या ?
उनले केही अगाडि मात्र इन्स्टाग्राम एकाउन्टमार्फत एउटा फोटो शेयर गरिन् । त्यस तस्वीरमा उनको साथमा बैंकर तथा आयुष्मानकी आमा रविना देशराजलाई देखियो । तस्वीरमा दुवै जना स्विमिङ सुटमा निकै हट अवतारमा देखिए । छोरासँग प्रेममा रहेकी प्रियंकाले आमासँग हट तस्वीर खिचाइन् त के भयो ? सबैले यसमा चाहिने नचाहिने कुरा गरे ।
हुर्मतै लिन खोजे । तिललाई पहाडै बनाए । यो देखेर हुइयाँलाई उठ्नुसम्मको रिस उठेको छ । आखिर उनले आफ्नो प्रेमीको आमासँग हट फोटो खिचाइन् र त्यो सार्वजनिक गरिन् त के भयो ? यसमा अरुलाई किन टाउको दुःखाइ ? आमासँग मात्र त्यस्तो फोटो खिचाएको भए पनि एउटा कुरा, प्रेमी आयुष्मानसँग पनि त सोही पहिरनमा खिचिएको भिडियो क्लिप आयुष्मानको इन्स्टाग्राम राखेका छन् नि ? मेल हुनु त यस्तो पो त, आयुष्मान र प्रियंकाको जस्तो, प्रियंका र रविनाको जस्तो ?